ဗေဒါဇွဲ ~ Nge Naing
Sunday, August 30, 2009 Nge Naing 8 comments
(၂၄၊ ၀၈၊ ၀၉)
(မျှဝေလိုသော စေတနာဖြင့် ဒီကဗျာပို့ပေးတဲ့ ကိုနီသွေးကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်)
ကဗျာနဲ့ ပတ်သက်လာရင် လုံးဝနားမလည်ပဲ ကိုယ်တိုင် ကဗျာစပ်မတတ်ပေယ့် ကျွန်မဘလော့ဂ်မှာ ကဗျာကို Label တခု သီးသန့်ထားရခြင်းရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က မိမိဖန်တီးမတတ်တဲ့ အနုပညာ တခုကို ဖန်တီးသူများရဲ့ ရင်ထဲက ခံစားချက်နှင့် တိုင်းပြည်အပေါ် ထားရှိတဲ့ စေတနာကို ကျွန်မကိုယ်တိုင် ထပ်တူထပ်မျှ ခံစားရတဲ့ ကဗျာတွေကို ပြန်လည် တင်ပြပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အခု ဒီကဗျာလေးဟာလည်း အမိမြန်မာပြည်အတွက် အရာအားလုံးကို စွန့်လွှတ်ပြီး မဆုတ်နစ်သော ဇွဲလုံ့လနှင့် သူရဲကောင်းပီသစွာ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ ကျွန်မတို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ မိခင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကိုယ်ကျိုးမပါတဲ့ စွန့်လွှတ်မှုနှင့် ဇွဲလုံ့လကို ဂုဏ်ပြုစပ်ဆိုထားတဲ့ ကဗျာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကဗျာကို စပ်ဆိုဖန်တီးသူ ကိုနီသွေးနဲ့ ထပ်တူထပ်မျှ ခံစားရင်း ပြန်လည် မျှဝေတင်ပြလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ စာလာဖတ်သူများအနေနှင့်လည်း ကျွန်မလိုပဲ ကဗျာရှင်ရဲ့ ဖန်တီးမှုကို ဖန်တီးသူနဲ့ ထပ်တူထပ်မျှ ခံစားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်သို့ ရှေ့ရူလျက်
August 30, 2009 at 10:03 PM Reply
ကဗျာ လေး ဖတ်သွားတယ်
August 30, 2009 at 11:16 PM Reply
ကဗျာရေးသူကိုရော တဆင့် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးသူ မငယ်နိုင်ကိုပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
August 31, 2009 at 3:57 AM Reply
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ တကယ်ကောင်းတဲ့ ကဗျာလေးပါပဲ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မငယ်နိုင်ခင်ဗျား...။
August 31, 2009 at 5:17 AM Reply
31 Aug 09, 03:50
ကိုဇော်: ကဗျာလေးကို လာရောက်ခံစားသွားပါတယ် အမ
30 Aug 09, 22:42
အောင်သာငယ်: ကဗျာလာဖတ်သွားတယ် မငယ်နိုင်ရေ...
စာလာဖတ်သူများထဲမှ ဒီကဗျာလေးကို ဖတ်ပြီး C-Box ထဲမှာပါ အသိအမှတ်ပြု ခြေရာချန်ခဲ့တဲ့ ကိုအောင်သာငယ်နဲ့ ကိုဇော်၊ ဒီထဲမှာ ခြေရာချန်ခဲ့တဲ့ မမသီရိနဲ့ မှတ်ချက်ပေးသွားတဲ့ မမေဒါဝီ၊ ကိုညီလင်းတင့် တို့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မမေဒါဝီနဲ့ ကိုညီလင်းတင့် ပြောသလို ကဗျာကောင်းလေးဆိုတာ ကျွန်မသဘောတူပါတယ်။ ကိုညီလင်းတင့်က ကဗျာရှင်ကို ကျေးဇူးတင်တယ် မပြောပဲနဲ့ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ကျွန်မကို ကျေးဇူးတင်ရတာလဲ ကဗျာကို ကျွန်မစပ်တာမှ မဟုတ်တာ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီကဗျာလေးကိုတင်တဲ့ညမှာ ညတ၀က်ခန့်မှာ စာလာဖတ်သွားတဲ့ စာဖတ်သူ ၇၀ ခန့်ထဲက ဒီငါးယောက်တည်း ခြေရာချန်ခဲ့တာကို ကျေးဇူးတင်စွာနဲ့ ကျွန်မ အသိအမှတ်ပြုထား လိုက်ပါတယ်။ ဘာခြေရာမှ မချန်ပဲ ဖတ်ပြီးပြန်သွားသူ အားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုတလော ကျွန်မ ကျောင်းက Assignment တွေနဲ့ သိပ်အလုပ်များနေလို့ ကျွန်မဆီ ရောက်လာသူတွေဆီကလွဲရင် တခြားဘလော့ဂ်တွေကို သိပ်မလည်နိုင် ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျွန်မဆီ ရောက်လာခဲ့ပေမယ့် မိတ်ဆွေတွေရဲ့ ဘလော့ဂ်တွေကို ပြန်လည်မဖြစ်ပဲ မေ့ကျန်နေခဲ့ရင်လည်း နားလည်ပေးကြဖို့ ကြိုတင်ပြီး တောင်းပန်ထားချင်ပါတယ်။
August 31, 2009 at 7:15 PM Reply
Beautiful impressive poem !
September 1, 2009 at 5:34 PM Reply
are you also medic?
September 1, 2009 at 7:00 PM Reply
1 Sep 09, 17:09
အိအိ: ငယ်လေးရယ် ရောက်တယ်နော် ဗေဒါဇွဲကဗျာလေးကို ဖတ်သွားတယ်
31 Aug 09, 17:43
ကွီနိုင်း: ကဗျာလေးကို လာပြီး ခံစားသွားပါတယ်ဗျာ။
ဒီကဗျာလေးကို လာရောက်အားပေးသူအားလုံးကို ကဗျာရှင်ကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောပါရစေ။
Steve Evergreen-ကျွန်မက နယ်စပ်ဒေသက လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ တခုဖြစ်တဲ့ ABSDF အမှတ် (၂၀၁) တပ်ရင်းမှာ ဆေးမှူးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ လာလည်တာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နောက်လည်း ကျွန်မဘလော့ဂ်ကို လာလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။